Filimka Cherry, ayaa horseed u noqday soo saarista isbuuc dhammaadkii dhammaaday | Waxaan ka socdaa mac
Laga soo bilaabo 12-kii Maarso, Apple waxay ku dartay Apple TV + buugga filimka Cherry, filim waxaa hogaaminaya walaalaha Russo waxaana jilaya Tom Holland. Tan iyo markii ay soo ifbaxday dhammaadkii usbuucii la soo dhaafay, waxay horseedday soo saarista adeegyada qulqulka ee Mareykanka.
Sida laga soo xigtay ragga ka socda Reelgood, Cherry wuxuu ahaa filimka loogu daawashada badan yahay usbuucii hore, marka loo eego caadooyinka isticmaalka ee isticmaalayaasha kuwaas oo u adeegsada barnaamijkooda macluumaadka taxanaha iyo filimada adeegyada kaladuwan ee fiidiyoowga ah.
En booska labaad waan helnay Imaatinka 2 Ameerika, waxaa lagu turjumay Spain sida Boqorka Zamunda, qaybta labaad ee Amiirka Zamunda. Filimkan, waxaa la dhigay booska saddexaad ee qiimeynta taranka. Labada filimba waxaa laga heli karaa Amazon Prime Video.
cherry kama helin dib u eegis wanaagsan dhaleecaynta, wuxuu leeyahay 37% dhibcaha Tamaandhada quruntay, in kastoo si wanaagsan ay u soo dhoweeyeen dadweynuhu, kuwaas oo siiyay dhibco dhan 73%.
Filimkan waxaa dhiirrigeliya iibiyaha ugu magaca badan. Waxay ku jileysaa Tom Holland doorka cinwaanka oo ah dabeecad qallafsan oo dabeecad xumo ka dib markii uu ka soo laabtay Ciraaq daroogo.
Cherry wuxuu ku soo laabtay gurigiisa halyeey dagaal, oo la dagaallamaya jinniyada PTSD ee aan la ogaan karin isagoo ku tiirsan xaaskiisa Emily (oo ay ciyaareyso Ciara Bravo) oo ku sii qulqulaya daroogada maandooriyaha. ku hareeraysan koox ka mid ah xumaan-xumada.
Si loo sii wado bixinta mukhaadaraadkiisa, dalxiisyada dhaca bangiga. Cherry waa sheeko madoow oo aan qallafsaneyn oo ku saabsan da'da sheekada nin ee raadinta guud ee ujeedada iyo xiriirka aadanaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Filimka Cherry, ayaa horseed u ahaa soo saarista oo la sii daayay usbuucii hore